फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना, कडा निषेधाज्ञा होला ? – Hamro24News
फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना, कडा निषेधाज्ञा होला ?
July 8, 2021 adminLeaveaComment on फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना, कडा निषेधाज्ञा होला ?
काठमाडौं । सरकारले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । गत २० असारदेखि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गराएसँगै संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो । संक्रमण बढेसँगै तेस्रो लहर आउन सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
२० असारयता बुधबारसम्म ४४ हजार १ सय १ सय ४२ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा ९ हजार ८ सय ३८ जनामा संक्रमण देखिएको छ । यसरी हेर्दा २२ दशमलव २८ प्रतिशत संक्रमणदर रहेको हुन आउँछ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
बाढीले घर भ’त्काउँदा श्रीमान-श्रीमतीको मृ’त्यु
भान्जाको कु’ट’पि’टबाट मामाको मृ’त्यु !
इतिहाँस मै पहिलोपटक हिज सांसद भवनमा घटेको यो अनौठो घटना?
केपी ओली र माधव नेपाल अब एउटै बेञ्चमा बस्ने, एमाले नेताकार्यकर्तामा छायो खुशी?